सरकार अनुदारवादको बाटोमा हिँडेकै हो त ? | गृहपृष्ठ
Home पाठक विचार सरकार अनुदारवादको बाटोमा हिँडेकै हो त ?
on: August 26, 2018 पाठक विचार
वर्तमान सरकारले लाइसेन्स तथा नियमनको क्षेत्र विस्तार गरिरहेको छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा राज्यको हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ । सरकारले अपनाएका कर तथा आर्थिक नीति तथा यसका व्यवहारले नेपालमा पुनः पञ्चायतकालको जस्तो अनुदारवादी अर्थतन्त्र अर्थात् राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र लागू हुन थालेको धेरैले आरोप लगाउने गरेका छन् । सरकारले पुराना र असफल भइसकेका नीतिहरू पुनःस्थापना गर्न गइरहेको छ ।
सरकार आफै उद्यमी बन्न खोजेको छ । रुग्ण उद्योग खोल्नेलगायत काममा सरकार सक्रिय छ । उद्योग चलाउन असफल भइसकेको अवस्थामा उद्यमीहरूलाई यसो गर र उसो गर भनेर निर्देशित गर्न खोजिरहेको छ जुन सुहाउँदो छैन । राज्यले असफल भइसकेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई ब्यूँताउन खोजिरहेको छ । हामीसँग निजी–सरकारी साझेदारीका नकारात्मक उदाहरणहरू धेरै छन् । यी उदाहरणले स्पष्ट देखाएका छन् राज्यका निकायमा रहेका नेता आम करदाताको पैसाले आफूले रुचाएको वा आफ्ना नजीक रहेका व्यापारीलाई पोस्ने गर्छन् । त्यसैले सकेसम्म सरकारले देशका हरेक उद्यमीहरूलाई बजारलाई समान रूपमा खेल्ने मैदान उपलब्ध गराउनुपर्छ । आम जनताले तिरेको करले कुनै नराम्रो नियत राखेर कसैलाई पोस्न हुँदैन ।
सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको श्वेतपत्रले नेपालको आर्थिक अवस्था नकारात्मक भएको र त्यसका लागि राज्यले थप निर्देशित गर्नुपर्ने कुरो औंल्याएको थियो । नेकपाको सरकार यसअघि धेरैपटक सरकारमा गएकाले यसअघिका विकृतिको जिम्मेवार ऊ पनि हो । दोष जति काङ्ग्रेसको र राम्रो जति आफूले गरेको भनी जस लिने प्रवृत्ति खतराको सूचक हो । अर्थमन्त्री डा. खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षका रूपमा नेपालको तीनवर्षे योजनाका योजनाकार थिए । उनी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरका रूपमा ५ वर्षसम्म नेपालको मौद्रिक नीतिको निर्माता पनि भए । तर, त्यसबेलाका विकृतिको जिम्मेवारी उनले लिएका छैनन् । सरकारको हालका आर्थिक नीतिहरूले २०४६ सालपछिका उपलब्धिलाई नकार्दै नयाँ काम गर्न खोजेको दाबी गरेको छ । सरकारकोे यो नीतिले उद्यम र उत्पादनको वातावरण अझ कठिन बनाउनेछ ।
सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूका लागि दिएको छूट हटाएको छ । उत्पादनका लागि आवश्यक वस्तुहरू तथा आयातमा दिइँदै आएको छूट हटाउँदा यसले एकातिर आयात बढाउँछ भने अर्कातिर स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाउँछ । अन्ततः उद्योगहरू धराशयी भई बेरोजगारी बढाउँछ । सरकारको वर्तमान नीतिले विदेशी लगानीको दायरालाई साँघुरो बनाइदिएको छ । जतिसुकै वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नारा दिए पनि सरकार आफै उद्योग खोल्न तम्सनु र अन्य क्रियाकलापले ‘डुइङ बिजनेश’को वातावरण बिग्रँदो छ । यसको असर देखिनलाई केही समय लाग्ला । चीन भियतनामजस्ता कम्युनिष्ट सरकार भएका देशले समेत भएका सरकारी उद्योग क्रमशः निजीक्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्दै उद्योग व्यवसायबाट हात झिकिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले बन्द उद्योगहरू खोल्न पहल थाल्नु कम्युनिष्ट चरित्रको अनौठो आकर्षण हो ।
पक्कै पनि नेपालको निजीक्षेत्रमा कमजोरी छ । तर, निजीक्षेत्रका विकृतिको एउटा कारण राज्य पनि हो । निजीक्षेत्रमा हुनुपर्ने खुला प्रतिस्पर्धाको वातावरणलाई पनि राज्यले नै बिगारेको हो । अहिलेको सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने ठाउँमा उल्टो काम गरेको छ । लगानीकर्ता सरकारप्रति आशङ्कित छन् । आफन्त–पूँजीवादको डर देखापरेको छ । यातायात सिण्डिकेट भयो भन्दै आफन्तलाई रूट पर्मिट दिलाइएको छ । कालीमाटी तरकारी बजारमा पनि यस्तै काम हुँदै छ भनी आशङ्का गरिएको छ । त्यसैले सरकारका नीतिले देशको अर्थतन्त्र सुध्रन निकै कठिन देखिन्छ ।
कपन, काठमाडौं ।